On ukudayiswa ungathola izimonyo onhlobonhlobo. Amehlo ukusebenzisa enaleni okhilimu, si, amashampu, buso kanye neminye imikhiqizo yezimonyo. Pho makudle zabo?
Sekuyisikhathi eside iyinto enkulu kwaba izimonyo, ngesisekelo okuyinto izithako zemvelo bakha. Namuhla, abakhiqizi abaningi kuyothuthuka imikhiqizo yabo, izama ukuqinisekisa ukuthi mncane zamakhemikhali ngangokunokwenzeka.
Ngifuna ukuxoxa kabanzi mayelana izimonyo Lumene ukuzwa ukuthi othile wayetshale eziningi. Ngeke uyifune yiyona izimonyo best, kodwa ukuthola lokho oyikho nalokho hlobo lwempendulo ngakho ukushiya abathengi, kuyafaneleka.
Izimonyo Lumen - imvelo emzabalazweni ubuhle
Manje-ke kwenzeka ukuthi engingumuntu omncane kunomncane okulandelayo nokuhlanzeka kwangaphandle nokuziphatha kwabo kunabesifazane. Kwakamuva akhokhe a lot of ukunakwa for ubuso wamnakekela izinwele nomzimba, ukulwa imibimbi nezinye izinkathazo ezihlobene nokukhula.
Okukushoyo isikhumba ukunakekelwa kanye izimonyo zokuhlobisa Lumene - sibonelo esigqamile kanjani izinqubo abavamile nsuku zonke ezihlanzekile futhi yezimonyo ayabaluleka elalenziwa Okuyınqo, isici esiyisihluthulelo okuyinto ukusetshenziswa izithako zemvelo. ukunakekelwa Skin uguqulwe injabulo, ngoba imikhiqizo wale nkampani uyabanakekela ngempela esikhumbeni, ukuvikela ke emathonyeni zangaphandle kanye okunomsoco ngayo amavithamini, izakhi trace.
Lumen kuyinto imikhiqizo izimonyo imikhiqizo ukunakekelwa kwesikhumba, okuhlanganisa ephulukisa izitshalo enyakatho. Inkampani uqobo sekuqalile ukusebenza ngo-1970 e-Finland, futhi igama lalo kanye nemikhiqizo yayo wanikeza echibini lumens emangalisayo enhle. Kusukela yaqala ukuba khona, ochwepheshe yenkampani abamfunanga ukufaka ekhiqizwa izimonyo izingxenye ezingavamile futhi kuyabiza.
inkampani Indawo eFinland, emazweni aseScandinavia, kanye emasikweni Finns lasendulo wasiza ukwakha izimonyo emangalisayo kwengoma. Cranberries, currants, yefilakisi, amajingijolo, Ama-cloudberry, cranberry, ijikijolo lingase - konke ikhula elisizungezile. Kungani-ke ungasebenzisi lezi zitshalo, unothile ngamavithamini kanye micronutrients, womshini ukunakekelwa kwesikhumba, umzimba nezinwele?
Kuwufanele benaka yokuthi ngesisekelo izimonyo Lumen kuyinto amanzi Finnish lwemvelo spring, okuyinto obonwa UNESCO njengoba arcade amanzi emhlabeni. Le nkampani njalo ekuthuthukiseni ubuchwepheshe yayo, Innovating, ngaleyo ndlela kwande izinga konke izimonyo. Oseneminyaka engu-namuhla, ochwepheshe inkampani Finnish wadala okunhlobonhlobo imikhiqizo ukunakekelwa kwesikhumba, kuye ngokuthi isimo sayo. Nge amahle makeup Lumen sekulula kakhulu futhi ngokushesha. Lokhu kwabenza baqiniseka abesifazane abaningi.
imikhiqizo Lumene: Izibuyekezo
izimonyo Lumen athandwa kakhulu hhayi kuphela e-Finland kodwa futhi kwamanye amazwe. Ujwayelene mkhiqizo futhi ubuhle Russian. Abaningi babo ngokuzama izimonyo ezahlukene wafinyelela esiphethweni ukuthi kahle kakhulu isikhumba kwabo izimonyo Lumen nje. Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo eziningi, yonke imikhiqizo ngaphansi kwalesi brand, elinesimo izinga okusezingeni eliphezulu. izimonyo zemvelo izingxenye bayakuvumela ukuba usebenzise ngaphandle enovalo owengeziwe.
Ngo umbala izimonyo Lumen ukubuyekezwa kanye esikhathini esiningi omuhle. amantombazane Modern uthole injabulo yangempela kusuka ukusetshenziswa izithunzi, Mascara, ithoni ukhilimu, powder nokuningi. Lumen Izimonyo ikuvumela ukudala enhle nsuku zonke futhi kusihlwa ukwakheka, ukugxila amehlo noma izindebe kuphela.
Lumene imikhiqizo nezinkampani ufanelwe ukuqashelwa yilowo nalowo owesifazane osuke ezahlukweni isikhathi okukhulu ekunakekeleni nokuhlanzeka kwangaphandle nokuziphatha kwabo.
Nsuku zonke uyozizwa uzilungise futhi enhle, ekubambeni yena bencoma nhla yabanye.
Izimonyo BIOSEA: ukubuyekezwa. izimonyo French "BIOS". Yemvelo Organic Izimonyo
"Ajmal" (imimoya): ako kanye nokubuyekeza
Musk - kuyini? Musks amakha. must Iphunga
Yini esinitshela Sarah (igama)? Value, imvelaphi, igama imfihlo
Kube goiter? ukwelashwa kungakusiza
Ungadla kuyo yonke imithi umdlalo ukwenza: yokukhiqiza ubuchwepheshe
Indlela yokufaka imidlalo ku-Android? Umhlahlandlela Wokuqala Osheshayo
Chimera. Yini-ke nokuthi libukeka isidalwa?
Indlela yokwenza amazwana HTML
Krikalev Sergey Konstantinovich: Biography, izithombe